2 Tantara 29 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao (2008)
2 Tantara 29:1-36
29 Dimy amby roapolo taona i Hezekia+ tamin’izy nanomboka nanjaka, ary sivy amby roapolo taona no nanjakany tany Jerosalema. Ny anaran-dreniny dia Abia, zanak’i Zakaria.+ 2 Ary nanao izay mahitsy teo imason’i Jehovah foana i Hezekia,+ toy izay rehetra nataon’i Davida razambeny.+ 3 Izy no nanokatra ireo varavaran’ny tranon’i Jehovah ka nanamboatra ny simba tamin’ireo,+ tamin’ny volana voalohany tamin’ny taona voalohany nanjakany. 4 Ary nentiny nivory teo amin’ny tany malalaka,+ teo atsinanana, ny mpisorona sy ny Levita. 5 Dia hoy izy tamin’ireo: “Mihainoa ahy, ry Levita! Hamasino+ ny tenanareo ary hamasino koa ny tranon’i Jehovah Andriamanitry ny razanareo, ka avoahy avy ao amin’ny toerana masina ny zavatra tsy madio.+ 6 Fa ny raintsika efa nivadika+ tamin’Andriamanitsika, sady nanao izay ratsy teo imason’i Jehovah Andriamanitsika,+ ka nahafoy azy+ sy nihodina tsy hijery ny tranolain’i Jehovah+ intsony ary nanome lamosina azy. 7 Nanidy ny varavaran’ny+ tilikambo fidirana koa izy ireo, ary tsy nandrehitra ny jiro.+ Tsy nandoro emboka manitra izy ireo,+ na nanolotra fanatitra dorana ho an’Andriamanitry ny Israely+ tao amin’ny toerana masina. 8 Koa tezitra+ tamin’ny Joda sy Jerosalema i Jehovah, ka nataony zavatra atahoran’ny olona ny ho tonga tahaka azy.+ Nataony igagan’ny olona+ sy mahatonga ny olona hisioka+ koa izy. Izao hitan’ny masonareo izao izany. 9 Noho izany, dia lavon-tsabatra ny razantsika,+ ary lasa babo ny vady aman-janatsika.+ 10 Irin’ny foko kosa izao ny hanao fifanekena+ amin’i Jehovah Andriamanitry ny Israely, mba tsy hirehitra amintsika intsony ny fahatezerany. 11 Koa ankehitriny, aza malaindaina+ ianareo, ry zanako, fa ianareo no nofidin’i Jehovah hijoro eo anatrehany mba hanompo azy+ ary koa mba ho mpanompony+ sy ho mpanolotra setroka ho sorona.”+ 12 Dia nitsangana ireo Levita:+ I Mahata zanak’i Amasay, sy Joela zanak’i Azaria, avy tamin’ny taranaky ny Kehatita;+ Kisy zanak’i Abdia, sy Azaria zanak’i Jehalalila, avy tamin’ny taranak’i Merary;+ Joa zanak’i Zima, sy Edena zanak’i Joa, avy tamin’ny Gersonita;+ 13 Simry sy Jeoela avy tamin’ny taranak’i Elizafana;+ Zakaria sy Matania avy tamin’ny taranak’i Asafa;+ 14 Jehiela sy Simey avy tamin’ny taranak’i Hemana;+ ary Semaia sy Oziela avy tamin’ny taranak’i Jedotona.+ 15 Avy eo dia namory ny rahalahiny izy ireo, ka nanamasina+ ny tenany ary tonga mba hanadio+ ny tranon’i Jehovah araka ny didin’ny mpanjaka, mifanaraka amin’ny tenin’i+ Jehovah. 16 Dia nankao an-tranon’i Jehovah ireo mpisorona mba hanadio. Ary navoakan’izy ireo teny an-tokotanin’ny+ tranon’i Jehovah ny zavatra maloto rehetra hitan’izy ireo tao an-tempolin’i Jehovah. Noraisin’ny Levita kosa izany ka navoakany tany ivelany, tany amin’ny lohasaha falehan-driakan’i Kidrona.+ 17 Dia nanomboka nanamasina ny tempoly izy ireo, tamin’ny andro voalohan’ny volana voalohany. Ary tonga teo amin’ny tilikambo fidirana+ amin’ny tranon’i Jehovah izy ireo, tamin’ny andro fahavalon’ny volana. Koa nohamasinin’izy ireo nandritra ny valo andro ny tranon’i Jehovah. Ary vitany avokoa izany tamin’ny fahenina ambin’ny folon’ny volana voalohany.+ 18 Dia nankao amin’i Hezekia Mpanjaka izy ireo, ka niteny hoe: “Efa voadionay ny tranon’i Jehovah manontolo, sy ny alitaran’ny+ fanatitra dorana mbamin’ny fitaovany rehetra,+ ary ny latabatry+ ny mofo mifanaingina mbamin’ny fitaovany rehetra.+ 19 Efa nomaninay sy nohamasininay+ koa ny fitaovana rehetra,+ izay nesorin’i Ahaza Mpanjaka+ mba tsy hampiasaina tamin’ny andro nanjakany, tamin’izy nivadika+ tamin’Andriamanitra. Ary efa eo anoloan’ny alitaran’i Jehovah izany.” 20 Ary nifoha maraina+ i Hezekia+ Mpanjaka, ka namory an’ireo andrianan’ny+ tanàna, dia niakatra nankany an-tranon’i Jehovah. 21 Ary nitondra ombilahy fito+ sy ondrilahy fito sy ondrilahy kely fito izy ireo, ary koa osilahy fito mba hatao fanatitra noho ny ota.+ Ho an’ny fanjakana sy ny toerana masina ary ny Joda, no nanaovana izany. Dia nilazan’i Hezekia ireo mpisorona taranak’i Arona+ mba hanolotra izany teo amin’ny alitaran’i Jehovah. 22 Koa novonoina+ ny omby, ary nalain’ireo mpisorona ny ra+ ka nafafiny+ teo amin’ny alitara. Novonoin’izy ireo koa ny ondrilahy+ ary nafafiny teo amin’ny alitara ny ra.+ Dia novonoiny koa ny ondrilahy kely ary nafafiny teo amin’ny alitara ny ra. 23 Dia naka an’ireo osilahy+ hatao fanatitra noho ny ota izy ireo, ka nitondra izany teo anatrehan’ny mpanjaka sy ny fiangonana, ary nametraka ny tanany teo amin’ireo osilahy.+ 24 Dia novonoin’ny mpisorona ireo osilahy ka nataony fanatitra noho ny ota, ary nafafiny teo amin’ny alitara ny rany, ho fandrakofam-pahotana ho an’ny Israely rehetra.+ Ho an’ny Israely rehetra+ mantsy no nasain’ny mpanjaka nanaovana ny fanatitra dorana sy ny fanatitra noho ny ota.+ 25 Ary nalahatr’i Hezekia tao an-tranon’i Jehovah ny Levita+ nitondra kipantsona+ sy lokanga+ ary harpa,+ araka ny nandidian’i Davida,+ sy Natana+ mpaminany, ary Gada+ mpahita fahitana ho an’ny mpanjaka. Fa i Jehovah no nanome izany didy izany tamin’ny alalan’ny mpaminaniny.+ 26 Koa nijoro ireo Levita nitondra ny zavamaneno+ namboarin’i Davida, ary nijoro koa ireo mpisorona nitondra ny trompetra.+ 27 Dia nasain’i Hezekia natolotra teo amin’ny alitara ny fanatitra dorana. Ary tamin’ny fotoana nanombohan’ny fanatitra dorana, dia natomboka koa ny hira+ ho an’i Jehovah. Notsofina koa ny trompetra, izay nampifanarahina tamin’ny feon’ireo zavamaneno namboarin’i Davida mpanjakan’ny Israely. 28 Koa niankohoka+ ny fiangonana manontolo, rehefa nanakoako ny hira+ sady naneno mafy ny feon’ny trompetra. Tsy nijanona izany rehetra izany mandra-pahavitan’ny fanatitra dorana. 29 Ary raha vao vitan’izy ireo ny fanatitra, dia niondrika sy niankohoka+ ny mpanjaka sy ny olona rehetra niaraka taminy. 30 Dia nilazan’i Hezekia Mpanjaka sy ny andriana+ ireo Levita mba hidera an’i Jehovah tamin’ny tononkira nataon’i Davida+ sy Asafa+ mpahita. Koa nanao fiderana tamim-pifaliana+ izy ireo, ary tsy nitsahatra nandohalika sy niankohoka.+ 31 Farany dia hoy i Hezekia: “Nahazo fahefana ho mpisorona indray ianareo izao, mba hanao fanompoana ho an’i Jehovah.+ Koa manatòna, ka mitondrà sorona+ ary manatera sorona fisaorana+ ao an-tranon’i Jehovah.” Ary nitondra sorona sy nanatitra sorona fisaorana ny fiangonana, fa nitondra fanatitra dorana kosa izay rehetra natosiky ny fony.+ 32 Koa ny isan’ny fanatitra dorana nentin’ny fiangonana dia omby fitopolo, sy ondrilahy zato, ary ondrilahy kely roanjato, izay samy fanatitra dorana ho an’i Jehovah avokoa.+ 33 Ary ny fanatitra masina dia omby eninjato sy ondry telo arivo. 34 Vitsy kely anefa ny mpisorona+ ka tsy nahavita nanendaka ny hoditry ny fanatitra dorana rehetra.+ Koa nanampy azy ireo ny Levita rahalahiny,+ mandra-pahavitan’ilay asa+ sy mandra-panamasin’ny mpisorona ny tenany.+ Fa nazoto+ kokoa nanamasina ny tenany ny Levita raha noharina tamin’ny mpisorona. 35 Be dia be koa ny fanatitra dorana+ mbamin’ny tavin’ny+ fanatitra iombonana+ ary ny fanatitra zava-pisotro+ izay nampiarahina tamin’ny fanatitra dorana. Dia toy izany no nanomanana+ ny fanompoana tao an-tranon’i Jehovah. 36 Koa nifaly i Hezekia sy ny vahoaka manontolo noho izay nataon’Andriamanitra ho azy ireo.+ Tampotampoka mantsy no nitrangan’izany zavatra izany.+